Animation Kyoto hampiasa vola 10,1 tapitrisa dolara amin'ireo niharan'izany - Hafa
Kyoto Animation dia hampiasa fanomezana $ 10,1 tapitrisa dolara hanampiana ireo tra-boina amin'ny fanafihana mirehitra
Fantatsika rehetra ny tranga nahatsiravina taorian'ny Kyoto Animation tamin'ny Jolay 2019. Izay an-tsitrapo no nahavanon-doza mandoro mankany amin'ny tranoben'i Kyoto Animation. famonoana Olona 36 hatramin'ny Oktobra 2019.
Ny vola dia nalefa tany amin'ny Kyoto Animation tamin'ny alàlan'ny GoFundMe, sehatra famatsiam-bola. Mitontaly $ 10,1 tapitrisa dolara mahery ankehitriny.
Tamin'ny sioka iray nosoratana tamin'ny teny Japoney, Shinichi Isa nanambara Kyoto Animation TSY hampiasa ny vola ho an'ny orinasany. Fa kosa - hampiasa ny vola ho an'ny niharam-boina ny trangana afo.
Ary hatreto - izany dia midika REHETRA amin'ny $ 10,1 tapitrisa dolara (sy maro hafa) ao amin'ny kaonty fanomezana.
Ny Kyoto Animation sy ny fanomezana manerantany dia tsy hampiasaina hanombohana indray ny orinasa fa hampiasaina ho an'ny fianakaviana sahirana rehetra, olona maratra ary ny fianakavian'izy ireo.
Amin'ny maha orinasa anay dia hanomboka handeha irery izahay nefa tsy hahazo fanampiana avy any ivelany, ao anatin'izany ny fanohanan'ny besinimaro.
Amin'ny 3 sy 4 novambra, Miyako Messe (Kyoto Messe Exhibition Center) dia hanangana toerana hisaonana ireo mpankafy sy ny hafa. pic.twitter.com/9qfpHKFGhm
- Shinichi Isa (@isashinichi) 2 Oktobra 2019
“Ny Kyoto Animation dia tsy hampihatra ny vola azony tamin'ireo mpanome manerana an'izao tontolo izao hanarenana orinasa, fa hampiasa izany rehetra izany ho an'ireo maty, naratra ary ny fianakavian'izy ireo.
Ny orinasa mihitsy dia tsy hitazona na inona na inona fanampiana ara-bola, ao anatin'izany ny vola avy amin'ny andrim-panjakana, ary handroso eo ambany fahefany manokana. '
Hatao ihany koa ny serivisy fahatsiarovana manodidina ny 3 Novambra, hisokatra ho an'ny besinimaro any Japon.
Ny mpankafy sasany dia manombatombana raha hiafara mihidy amin'ny vavahady i Kyoto Animation, saingy tsy mino aho.
Ny zavatra dia haka fotoana kely fotsiny hanampiana azy ireo hiverina amin'ny tongony.
Tiako ny sarimiaina Kyoto (fanomezam-boninahitra avy amin'ny mpankafy anime mahatoky)
Lesona 5 amin'ny fiainana ara-pientanam-po dia hampianatra anao i Violet Evergarden